Ababuyisi bobugcisa babiza uhlengahlengiso emva kokuba omnye umzobo utshatyalalisiwe - Ubugcisa
Eyona Ubugcisa Ababuyisi bobuGcisa bafuna iCrackdown kwi'Botcher 'Emva kokuba omnye uMzobo utshatyalalisiwe
Eyokuqala Ukukhulelwa okungagungqiyo , 1665-1670 nguBartolomé Esteban Murillo obanjelwe eMuseo del Prado, eMadrid. Ukubuyiselwa okubhaliweyo kwenziwa kwikopi yalo msebenzi.Imithombo yeendaba yobuGcisa / uPrinta uMqokeleli / imifanekiso ka-Getty
Kwiminyaka esibhozo eyadlulayo, abantu ababeze kwi-Sanctuary ye-Mercy Church yase-Borja, eSpain bothuka bakufumanisa ukuba umfanekiso oqingqiweyo ka Yesu oxabisekileyo wenkulungwane ye-19 Nantsi indoda eyayixhonywe ngaphakathi ecaweni yayisuswe ngaphandle kokuqondwa ngumfazi ogama linguCecilia Gimenez kwi ibhotile ngokupheleleyo umzamo wokubuyisela. Isiphumo, umzobo owonakeleyo wawusoyikeka oko kwabona ukuba kwavusa isimemo sehlabathi; ngoku, into efanayo yenzekile kumqokeleli wobugcisa wabucala eValencia, eSpain. Umqokeleli, ongekabizwa ngegama, kwathiwa uhlawuliswe i-1,200 ($ 1,360) ngumbuyisi wefanitshala ukuze afumane ikopi yakhe Ukukhulelwa okungagungqiyo nguBartolomé Esteban Murillo ucociwe. Endaweni yoko, kwehla intlekele, kwaye nembonakalo yabantu abapeyintiweyo yaxakaniseka.
BONA KWAKHO: Ngaba iSpanish's Botched St. George Sculpture ingalungiswa? Ababuyisi bobuGcisa baNgena ngaphakathi.
Iyaqhubeka ukwenzeka. Xa ungenelelo lungenziwa ziingcali zeCR, esi sisiphumo. #Umgaqo woBuchule @culturagob #SOSHeritage
Iposi ekwabelwana ngalo ngu ACRE (@asociacion_acre) ngoJuni 20, 2020 ngo-7: 09 am PDT
Ngoku, ekuphenduleni, iingcali zolondolozo lobugcisa eSpain zityhalela phambili ukuba ziqiniswe imithetho ejikeleze iinkqubo zokubuyisela, ukuze ezo ziganeko zingaphindi zenzeke: umzobo womqokeleli weValencia uye walwa ngobuso ngumvuseleli wefanitshala ngaphaya kwako konke ukuqonda. Andicingi ukuba lo mfo-okanye aba bantu-kufuneka kubhekiswe kubo njengababuyisi, uFernando Carrera, uprofesa kwiSikolo saseGalician soLondolozo kunye nokubuyiselwa kweLifa leMveli, uxelelwe UMgcini . Masithembeke: ziibhotile ezenza izinto phezulu. Batshabalalisa izinto. Ngokudabukisayo, ibonisa nje indlela ebaluleke ngayo ababuyisi abaziingcali. Kufuneka sityalomali kwilifa lethu, kodwa kwanangaphambi kokuba sithethe ngemali, kufuneka siqiniseke ukuba abantu abenza olu hlobo lomsebenzi baqeqeshiwe kuyo.
UCarrera wongeze ukuba abezopolitiko baseSpain kufuneka batyale imali ngakumbi kwaye batyale imali ekulondolozeni imbali yenkcubeko yelizwe, isibophelelo esibonelelwa ngoku. Inkqubo ye- Nantsi indoda Isiganeko sinokubonakala ngathi sihlekisa kubabukeli kwihlabathi liphela, kodwa ekupheleni kosuku, konke okwenzekileyo kukutshatyalaliswa kobugcisa; umsebenzi we-hatchet onokuthintelwa ongafanele ukuba uziphindaphinde. Ngelishwa, njengomfanekiso ka Yesu, le kopi ye Ukukhulelwa okungagungqiyo lonakele ngonaphakade.
Inyaniso ebangela ukurhoxa kukaBari Weiss kwi-'NyT '
UJane Powell ngokuguga, ukuBamba kunye neMGM
ICoronavirus iye yatyabula uMzi mveliso wezoSondo kunye nezoTyala. Amakhwenkwe eCam aNgena ngaphakathi.
Ugg! Iibhutsi eziFuzzy Blight City
kutheni intombi yam indikhohlakele kangaka
Amacebo okucoca amanzi endlini yonke
iphepha elimhlophe iintsuku ezi-7 zesilingo sasimahla
ukufumana inombolo yefowuni mahala
ukugcina kunye nee-kardashians meme